Ekenay fa ny mpitantana ny haran-dranomasina sy ny mpampiasa azy dia mety hahafantatra kokoa an'io teny io maloto rehefa mandinika ny fiantraikany lehibe amin'ny haran-dranomasina, na izany aza, hampiasa ilay teny izahay rano maloto manerana ny kitapo satria izy io dia mamaritra marina ny loharanom-pahalotoana isan-karazany izay misy fiantraikany amin'ny haran-dranomasina. Ary satria ny fiaraha-miasa dia fanalahidy hiatrehana ireo loza ateraky ny fahalotoan'ny ranomasina amin'ny fako olombelona ary ny fampiasana terminolojia tsy miova dia manampy amin'ny fanamorana ny fiaraha-miasa amin'ireo sehatra hafa toy ny sehatry ny fidiovana.
Ny tanàna amoron-tsiraka lehibe sy ny tontolo an-tanàn-dehibe dia matetika loharanom-pahalotoana, indrindra any amin'ireo firenena ambany fidiram-bola. Manerantany dia manodidina ny 4.5 lavitrisa ny olona izay tsy manana fidirana amin'ny fidiovana azo antoka. Tafiditra ao anatin'ity vondrona ity ny olona 2.5 miliara izay tsy manana trano fidiovana mihitsy ary olona 1 tapitrisa eo ho eo no manao fahalotoana ankalamanjana. ref Na izany aza, na dia any amin'ny firenena mitady vola aza dia misy io fanamby io. Ohatra, maherin'ny 1.2 trillion litatra ny effluent (ao anatin'izany ny rano maloto tsy voatsabo, rano rivo-doza ary fako indostrialy) dia alefa any amin'ny lalan-drano any Etazonia isan-taona. ref
Ny singa mahazatra an'ny rano maloto dia misy rano madio, otrikaina, zavatra organika, bakteria, viriosy, katsentsitra, mpanakorontana endocrine, solida mihantona, fanafody, plastika bitika sy makro, akora simika ao an-trano, petrochemical, sediment ary metaly mavesatra — samy miasa miaraka ny tsirairay amin'izy ireo ny tontolo iainana amoron-dranomasina sy an-dranomasina. ref Ny habetsaky ny rano maloto avoakan'ny olona any an-dranomasina dia manimba ny toeram-ponenana misy fitsikerana, mamono ny fiainana an-dranomasina, mandrahona ny fahasalaman'ny olombelona ary manimba ny tontolo iainana iankinan'ny olona.
Samy hafa ny fiantraikan'ny fandotoana rano maloto ary misy fiantraikany amin'ny mponina, ny jeografia ary ny fotodrafitrasa. Ny fandotoana rano maloto dia azo ampifandraisina amin'ireto vokatra manaraka ireto ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy ranomasina nozarainay):
Ny voninkazo algaly manimba izay mety hamokatra poizina na ara-batana (oh: sargassum ahidrano) mamono ny fiainana an-dranomasina, moron-dranomasina akaiky, ary mety hiteraka aretin'olombelona amin'ny alàlan'ny fipoahana mivantana sy amin'ny alàlan'ny fihinanana hazan-dranomasina maloto. ref
Fandotoana ny jono sy ny fahafatesan'ny trondro ary koa ny fihenan'ny fahasamihafana isan-karazany amin'ny faritra maloto. Ireo fiantraikany ireo dia vokatry ny fiatraikany mivantana amin'ny fahalotoan'ny rano maloto amin'ny trondro tsirairay ary koa ny fihenan'ny oksizenina voarindra (noho ny fiakaran'ny haavon'ny otrikaina) sy ny poizina algaly. ref
Rehefa miditra amin'ny ranomasina ny rano maloto ary mifangaro amin'ny ranomasina dia miparitaka sy mihalefaka ny loto. Izany dia nanjary fiheverana maharitra fa "ny vahaolana amin'ny fahalotoana dia ny dilution". Saingy, ny fandotoana rano maloto mitohy dia mametra ny fahafahan'ny ranomasina manaparitaka ireo loto ireo, indrindra any amin'ireo faritra voafetra ny fisondrotan'ny rano na ny zava-manan'aina mora tohina. Ny paikady hanangonana sy hitsaboana rano maloto dia afaka misoroka ny fandotoana bebe kokoa ny ranomasina, na dia voatsabo aza effluent Mety hanimba ihany koa noho ny loto tavela amin'ny fitsaboana efa lany andro na tsy ampy. JEREO NY Fiantraikany amin'ny fiainana an-dranomasina ary Fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatry ny fandotoana rano maloto.
Ny fiovan'ny toetr'andro (ny fiakaran'ny maripana, ny haavon'ny ranomasina ary ny fanamasinana ny ranomasina) dia manamafy ny fiantraikan'ny fahalotoan'ny rano maloto. Ny fihenan'ny oksizenina, vokatry ny famoahana otrikaina ary voninkazo algaly mifanandrify aminy, mitarika fitomboan'ny famokarana azôro azota, gazy entona izay miteraka fiovan'ny toetr'andro. Rehefa mihabe ny isan'ny mponina manerantany sy ny loza mitatao amin'ny fiovan'ny toetr'andro, dia vao maika manamafy ny filàna fanalefahana ny fahalotoan'ny rano maloto eto amin'ny ranomasina. Ny mpitantana ny haran-dranomasina dia miatrika an'io fandrahonana io ary manampy amin'ny fiantohana ny fanadiovana ny tontolo iainana.
Ocean Sewage Alliance - Torolàlana ho an'ny mpitsabo ho an'ny fahalotoan'ny rano maloto amin'ny ranomasina